Ianaro Ireo Fepetran’ny Kitra Aostraliana, Anarana Biby Ary Hafa Koa Amin’ny Teny Kaurna · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Aogositra 2016 16:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Aymara, Italiano, English
Toy ny fandalinana tranga iray momba ny torolalana Voalohany amin'ny Fiteny ao Aostralia, “Warra: Manangana Ekipa, manamboatra fitaovana” , ny dika niandohana tamin'ity tantara ity, izay avy tamin'i Kaurna Warra Pintyanthi sy Karina Lester, Ekipa Mandehandeha ho an'ny Fiteny.
Namorona lesona an-dahatsary ao amin'ny Aterineto ho an'ny fanomezana aina vao indray ny fiteny ny Karuna Warra Pintyanthi (KWP), vondrona iray misy ireo mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina, mpampianatra, mpandalina teny ary ireo mpankafy ny fiteny, izay mampianatra ny fiteny Kaurna an'ny vahoaka Kaurna, ireo mponina voalohany tao amin'ireo faritra Lemak'i Adelaide any Atsimon'i Aostralia.
Miseho aminà andiany valo ankehitriny ireo karazana ‘Lesona’ Kaurna. Endrika be mpahafantatra sy arahan'ny maro amin'io tetikasa io ireo mpanolotra roa sady mpikambana amin'ny vondrom-piarahamonina Kaurna, Jack Kanya Buckskin sy Taylor Tipu Power-Smith.
Ao anatin'ireo lesona, miteny fiarahabàna fototra maromaro, voambolana sy fehezanteny avy amin'ny fiteny Kaurna i Buckskin, ary manazava izay dikany. Manazava ireo teny manodidina ny fialamboly ihany koa izy, toy ny golf, ny hazakazaka am-bisikileta, ary Ireo Fepetra Amin'ny Baolina Kitra Aostraliana na “Tidna partnu” — ilay fanatanjahantena tena malaza indrindra ao amin'ny firenena — amin'ny fiteny Kaurna. Ao amin'ity lahatsary ity, manazava ny sasany amin'ireo teny fampiasa matetika amin'ny fanatanjahantena i Buckspin si ireo namany, toy ireo teny fampiasa amin'ny fandakàna, fitondràna baolina an-tànana, ary ny fiondrehana.
Natao ho an'ny tanora Kaurna kosa ireo karazany hafa, amin'ny alalan'ny fandaharana ‘Kaurna ho an'ny Ankizy’, karakarain'i Power-Smith. Manafangaro lahatsary, fanentanana ary saribakoly etsehina io, ary toa hita ho tena malaza be tokoa. Hazavain'ny iray amin'ireo lahatsary be mpijery indrindra ny sasany amin'ireo biby izay mipetraka ao amin'ny faritr'i Adelaide, miaraka amin'ireo anarany Kaurna tsirairay avy.
Miseho manao fampianarana teny, mihira hira ihany koa amin'ny fiteny eo an-toerana ireo saribakoly miendrika biby ampitenenina. Manasongadina endrika toa an'i Kuula ilay Koala sy Pirlta ilay Possum ilay fandaharana antsoina hoe “Pirltawardl” na “Ny Tranon'ny Possum”.
Raha nieritreritra voalohany ny hamorona fitaovana ao amin'ny Aterineto ho fanomezana aina ilay fiteny ny KWP, nametraka lahatsary izy ireo ho fototra, satria efa nahita olona maro mientanentana manana fahaizana amin'ny famokarana lahatsary ho mpikambana ao amin'ilay vondrona.
Miaraka amin'io fisian'ny fahaizana manao lahatsary io, nijery karazana fahafahana manao lahatsary isan-karazany amin'ilay fiteny, ny ekipan'ny fiteny, toy ny lahatsary fanadihadiana, mampientanentana, mampianatra, sns… ary nanapaka hevitra fa mety ho fitaovana tena ilain'ny vondrom-piarahamonina indrindra ireo karazana lesona amin'ilay fiteny.
Fiarahana miasa amin'ny Departemantan'ny Teny ao amin'ny Sekolin'ny Siansan'ny Mahaolona ao amin'ny Anjerimanontolon'i Adelaide ilay tetikasa, ary nahazo famatsiambola avy tamin'ny Fandaharanasa momba ny Fiteny Teratany sy ny Kanto an'ny Governemanta Aostraliana .
Raha navoaka ho hitam-bahoaka tamin'ny Aterineto ilay lahatsary ary afaka hitan'ny rehetra, manantena ny KWP fa hametraka ilay fiteny ho amin'ny toerany sahala amin'ny anaovan'ireo mpikambana amin'ilay vondrom-piarahamonina azy ireo mpijery. Milaza izao ny fanambaràna ao amin'ny vohikalan'ny KWP:
Fananan'ny vondrom-piarahamonina Kaurna ny fiteny sy ny kolontsaina Kaurna. Manainga ireo mpampiasa ity vohikala ity mba hampiasa amim-panajana ilay fiteny. Midika izany hoe manao ny ezaka rehetra mba hahaizana ny fanononana, fanoratana ary ny fitsipi-pitenenana tena izy. Mitazona ny zo hanaraka akaiky ny fampiasana ny fiteny eny imasom-bahoaka ireo vahoaka Kaurna. Tokony haka hevitra any amin'ireo vahoaka Kaurna ireo mpampiasa ity vohikala ity mikasika ny fampiasana ny fiteny eny amin'ny sehatra ho an'ny besinimaro.
Fomba tsara ahafahana mahazo ireo tanora sy olon-dehibe ny fahazoana mahita ireo lahatsary mahafinaritra sy mora azo ireo, ary tsara tokoa ny valin-kafatra. Nilaza izao tao amin'ny tafatafa i Karina Lester, avy amin'ny Ekipa Mandehandehan'ny Fiteny any Aostralia Atsimo:
Ohatra lehibe amin'ny fampiasana teknolojia mba hanatonana ireo mpijery azy — ireo tanora Kaurna any Adelaide — ireto lahatsary amin'ny YouTube ireto. Manainga ireo tanora sy ankizy Kaurna hafa hianatra ny fiteniny ny fananana an'i Jack sy Taylor izay tanora mpanolotra ireo andianà fampianarana fiteny ireo.